Nezvedu - Hebei Bocheng Co-chisikwa Kuyera Chishandiso Kugadzira Co, Ltd.
Kubva payakavambwa muna 2001, Hebei Bocheng Co-chisikwa Kuyera Chigadzirwa Chekugadzira Co, Ltd. yakawana yakasarudzika track track semugadziri wemhando dzakasiyana dzeanonyatso kuyera maturusi. Mushure memakore anopfuura gumi ekuenderera nekuvandudza uye kusimudzira, iyo fekitori yakaumba sisitimu sisitimu ine imwe nhanho yechigadzirwa. Isu tiri padanho repamberi repamba, kunyanya maererano nehunyanzvi hwekugona, simba rehunyanzvi uye ruzivo rwekugadzira, nezvimwe.
Isu tinogadzira akasiyana siyana ekuyera ekushandisa maturusi anosanganisira kukanda simbi pamusoro peplate, granite pamusoro peplate, yekunamatira tafura, modular 3D uye 2D yekunamatira matafura ane zvigadziriso uye kurongedza, yakagadzirirwa granite uye yakakanda simbi muchina zvikamu, Yakasarudzika simbi wedge, akasiyana marudzi eCast iron uye matombo ekuyera egranite. Fekitori yedu inoitawo dhizaini, kusimudzira uye kugadzira zvigadzirwa zvechinyakare uye inopa mhinduro dzechinangwa mune inoenderana mutsara wekugadzira
Zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa nekambani yedu zvinoenderana nezvinodiwa nemaindasitiri akakosha munyika. Kambani yedu inewo ma laboratori akazvimirira, uye yaunza kunze kwenyika huwandu hukuru hwezvigadzirwa zvemberi zvekugadzira. Iine yakanaka manejimendi modhi uye yepamberi yekugadzira sisitimu, mhando yemachini uye nguva yekuendesa yakave yakasimbiswa zvakanaka. Nekuda kweizvi, mhando yekambani iri kuramba ichigamuchirwa nevatengi kumba nekune dzimwe nyika. Isu tinoitawo kugadzira kweOEM kune akawanda epamba uye ekunze mabrandi.Iyo kambani yakagara ichiita: "yakafanana mhando, yakaderera mitengo; iwo iwo mutengo, wakakwira-mhando" bhizinesi uzivi, uye gara uchitora musimboti we "kuvimbika, kurwira, kushanda nesimba" sedanho rekuvandudza uye "kugutsikana kwevatengi" seyedu yekupedzisira chinangwa. Isu takagadzirira kuenda kumberi neshamwari dzese dzakabatana. Noushamwari vatengi vekunze nekune dzimwe nyika kuti vashanyire kambani yedu kuti vatungamirirwe. Vashandi vese veHebei Bocheng Co-chisikwa Kuyera Chigadzirwa Chekugadzira Co, Ltd. vari kutarisira kushandira pamwe newe nemoyo wese.